मच्छिन्द्र क्लबले देखेको त्यो सपना
काठमाडौं, पुस २६ : अघिल्लो वर्षको लिग रेलिगेशनबिनाको थियो। रेलिगेशनमा नपर्ने भएपछि कुनै पनि क्लबले त्यो संस्करणलाई त्यति गम्भीर रुपमा लिएनन्। उपाधि अभियानमा रहेका केही क्लबबाहेक अन्य ‘ए’ डिभिजन क्लबको सहभागिता केवल औचारिकता मात्रै रह्यो।
अघिल्लो वर्षको रेलिगेशनबिनाको लिगमा मच्छिन्द्र पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रह्यो, जसले मच्छिन्द्र १ अंक जरिवानामा पर्‍यो। तर यो सिजन मच्छिन्द्रले क्लब फुटबलमा जे गरेको छ, त्यो अन्य क्लबका लागि चुनौती बनिरहेको छ। लिगमा ६ खेल खेलेको मच्छिन्द्र शनिबार १३ अंकका साथ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ।
मच्छिन्द्र जारी लिगमा सर्वाधिक आक्रमक लगानी गरेर मैदानमा उत्रिएको क्लब हो। वर्तमान नेपाली क्लब फुटबलमा लगानी र दीर्घकालीन लक्ष्य बोकेर मैदान उत्रने सीमित क्लबहरु छन्। त्यसमा पनि निरन्तर अस्थिर रहने लिगमा औषत क्लबले एक करोडमाथि लगानी गर्नु चानचुने कुरा होइन। मच्छिन्द्रले अहिले त्यही साहस देखाएको छ।
मच्छिन्द्र क्लबका अध्यक्ष प्रवोधविर सिंह कशंकार भन्छन्, ‘हामीले एउटा आँट गरेकै हौं, यो आँट फुटबललाई माया गर्ने साथीहरुबाट पाएको सहयोगबाट नै सम्भव भएको हो।’
मच्छिन्द्रको फुटबल यात्रा
मच्छिन्द्र फुटबल क्लब काठमाडौंको मुटु केल टोलमा छ। केल टोल इन्द्रचोक र असनको बीचमा छ। चर्चित सेतो मच्छिन्द्रनाथको नामबाट जन्मिएको मच्छिन्द्र बहाल क्लब १६ वर्षअघि मच्छिन्द्र फुटबल क्लबमा रुपान्तरण भयो। सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्यले केन्द्रित मच्छिन्द्र बहाल विस्तारै फुटबलमा केन्द्रित भयो।
२०६० सालमा नाम फेरेर मच्छिन्द्र फुटबल क्लब बनाइयो, जुन अझै छरितो हुँदै मच्छिन्द्र क्लब बनेको छ। मच्छिन्द्र विस्तारै फैलियो। मच्छिन्द्रले सुरुवातमा फुटबललाई चिनायो। अहिले फुटबलले मच्छिन्द्रलाई चिनाउँदै लगेको मान्छन्, अध्यक्ष कशंकार।
मच्छिन्द्रको फुटबल यात्रा २०३२ सालमा ‘डी’ डिभिजनबाट सुरु भएको अध्यक्ष कशंकार बताउँछन्। त्यसको एक वर्षपछि मच्छिन्द्र ‘बी’ डिभिजनसम्मको यात्रा तय गर्‍यो। ‘डी’ डिभिनजबाट जब ‘बी’ सम्म आयो त्यसपछि मच्छिन्द्र २९ वर्ष ‘बी’ मा नै रहेर संघर्ष गर्‍यो। यो बीचमा मच्छिन्द्रले फुटबलको उतारचढाव धेरै देख्यो, भोग्यो।
अध्यक्ष कशंकार भन्छन्, ‘२९ वर्ष हामी ‘बी’ डिभिजनमा बस्दा हामीले फुटबलका धेरै उतारचढाव देख्यौं। कति ‘ए’ डिभिजनमा रहेका क्लबले लिग त्यागे। अनि धेरै क्लबहरुले फुटबल नै छाडे।’
तर मच्छिन्द्र भने सुसुप्त रुपमा ‘बी’ मै रहेर निरन्तर संघर्ष गरिराख्यो। मच्छिन्द्र फुटबलमात्र होइन सामाजिक काममा पनि निरन्तर सक्रिय रह्यो। आखि किन यति लामो समय मच्छिन्द्र ‘बी’ डिभिजनमा रह्यो त? कशंकार भन्छन्, ‘त्यसपछि लिगनै समयमा धेरै भएन यो बीचमा बिरलै मात्र लिग भयो। अनि धेरै क्लबहरु यही समयमा हराएर गए तर हामी रहिरह्यौं। जतिबेला अनुकूुल भयो। त्यसपछि हामी ‘ए’ डिभिजनमा उक्लिएका हौं।’
के हो क्लबको आम्दानीको स्रोत ?
मच्छिन्द्र क्लबले आफ्नो क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था राम्रो बनाएको छ। सडकमा बटुवाले दुःख पाउनु पर्दैन। सबैतिर सीसी क्यामेराहरु व्यवस्थितरुपमा जोडिएका छन्।
क्लबले व्यापारीहरुलाई पर्याप्त मात्रामा सुविधा उपलब्ध गाउँदै आएको र सोही बापत केही रकम व्यापारीहरुल दिने गरेका छन्। अझ त्यो भन्दा बढी स्थानीय सुभचिन्तककै मायाले क्लबले ठूलो लगानी गरेको बताउँछन् कंशकार। त्यसो त पछिल्लो समय मच्छिन्द्रले केही प्रायोजकको साथ पाएको छ।
क्लब चलाउन यो पटक मच्छिन्द्रलाई धेरै गाह्रो छैन। तर अब यसलाई टिकाउन दीर्घकालीन योजना अघि बढाउँदै लैजाने अध्यक्ष कशंकार बताउँछन्।
ठूलो लगानी गर्ने आँट कसरी आयो?
गत संस्करण रेलिगेशनविहीन लिगमा १३ औं स्थानमा रहेको क्लबले यो पटक कसरी ठूलो लगानी गर्ने आँट गर्‍यो त? यो प्रश्नको जवाफ दिँदै क्लब अध्यक्ष कंशकार भन्छन्, ‘अघिल्लो पटक माइनस अंकका कारण टिम राम्रो बनाउने दबाब थियो। त्यसैले क्लबले लगानी नै गर्नु पर्ने भएपछि एउटा लिगमा उपाधि जित्न सक्ने र दाबेदार नै किन नबनाउने भन्ने भयो?’
मच्छिन्द्रले क्लबलाई लिगमात्र होइन मोफसलका राम्रा गोल्डकपलाई आधार मानेर टिम तयार गरेको छ। त्यसैले यो पटक क्लबले मोफसलका उपाधिमा समेत आफूलाई दाबेदार बनाउने तयारी गरेको कंशकार बताउँछन्। उनले यो पटक सबै खेलाडीको गरेर तलबमा मात्रै करोड बढी खर्च निस्कने बताए। उनले सबै खेलाडीलाई चितबुझ्दो रकममा अनुबन्ध गरेको र खेलाडीबाट पनि सोही अनुसारको प्रदर्शनको अपेक्षा गरेको बताए।
फुटबलमा लगानी अपेक्षा गरेर नभई फुटबलप्रतिको माया र लगावले सम्भव भएको उनको बुझाइ छ। कंशकार भन्छन्,‘फुटबलमै लागेर नेपालमा कमाउने क्लब त कुन होला र? केही क्लबले आफूलाई चल्ने खर्च निकाल्न सकेका होलान्। हाम्रो पनि लक्ष्य क्लब आफू चल्न सक्ने बनाउन नै हो।’
०७० को सफलता आँटको आधार
‘ए’ डिभिजनमा उक्लिएको एक दशकसम्म मच्छिन्द्र केबल टिकिरहने उद्देश्यमा केन्द्रीत थियो। उपाधिविहीन हुँदा मच्छिन्द्रमाथि दबाब बढ्दै थियो, ०७० को लिग भने मच्छिन्द्रका लागि ट्रनिङ प्वाइन्ट बन्यो। त्यसअघि लिग खेल्दा क्लब लिगको मध्य तालिकामा रहने मच्छिन्द्रको दिन क्लब चलाउन आवश्यक बजेट जुटाउनमै बित्थ्यो।
त्यो फलदायी नदेखेपछि क्लब पदाधिकारीहरूले फुटबल नै छोडेर सामाजिक काममा मात्रै लाग्ने कि भन्नेतिर पनि सोचे। तर फुटबललाई माया गर्नेहरुको मन त्यति सजिलै कसरी छोड्न सक्थ्यो र? त्यसपछि फेरि क्लबले औषत टिमबाटै राम्रो नतिजा हात पार्ने कोशिस गर्‍यो।
त्यसको श्रेय व्यवस्थापक अनिल श्रेष्ठलाई पनि जान्छ। अनिलले २० लाखमा क्लबलाई घाटा नहुने गरी अघि बढाउने आधार दिए। सोही आधारमा अघि बढेको मच्छिन्द्र लिगमा पहिलो पटक उपविजेता बन्यो। त्यतिबेला अहिले नेपाली टिमका प्रशिक्षक रहेका योहान कालिनलाई क्लबले भित्र्याएको थियो।
मच्छिन्द्रको सफलताकै कारण कालिनले नेपाली राष्ट्रिय टिम समाल्ने अवसर समेत पाएका छन्। त्यही सफलताले पनि अहिले मच्छिन्द्रलाई हौस्याइरहेको छ।
Published Date: Saturday, 11th January 09:22:33 AM